laacib » Pep Guardiola oo doonaya dib in ay u midoowaan Thiago Alcantara & Qiimaha uu ku doonaya oo la ogaaday.
Pep Guardiola oo doonaya dib in ay u midoowaan Thiago Alcantara & Qiimaha uu ku doonaya oo la ogaaday.
Pep Guardiola ayaa doonaya in ay dib u midoowaan xiddiga laacibkii Bayern Munich iyo xulka spain ee Thiago Alcantara, kaasoo maamulka laacibkii ay awoodooda badan ku weeci doonaan suuqa kala iibsiga xilli ciyaareydka soo aadan.
Qiimo gaaraya £50m ayuu ku doonaya xiddigan reer Brazil macalinka wacdaraha ka dhigaya horyaalka EPL ee Pep Guardiola.
Guardiola hore ayuu usoo maamulay Thiago xiligii Barcelona iyo Bayern Munich, waxaana uu doonaya “Xavi cusub” qadka dhaxe ee city inuu ka garab ciyaarsiiyo David Silva, Fernandinho iyo Yaya Toure ayuuna rabaa inkastoo kuwaani uu kalsooni badan uusan ku qabin.
Macalinka City mar silva uu wax ka shegayey wuxuu yiri “xilli ciyaareydka xiga, David laga yabe inuu kulan walba ciyaarin, taasi ayaana u sabab ah wax kasta”
Waxaa uu lasoo saxiixday Thiago asigoo Munich jooga sanadkii 2013-ka, xilli xiddigan baahi weyn ay u qabeen Manchester United.
Thiago waxaa uu dhashay sanadii 1994-tii waana Brazillian hadii xirfadiisa uu sare u qaado xiddigan waxaa suurta gal ah inuu booska kala baxo Toure, kaasoo xilli ciyaareydkan markii uu dhamaado qandraaskiisa dhici doono.
Qandaraaskiisa laacibkii Bayern waxaa uu dhici doonaa 2021, sidoo kale waxaa uu qeyb ka yahay xiddigaha wacdaraha ka dhigaya sanadkan tartanka champions leaguemadama todobaadki lasoo dhaafay xiddigan uu ciyaarayey.